Baafin Gudidii Abaaraha | Somaliland Tomorrow
Baafin Gudidii Abaaraha
July 19, 2017 - Written by adan caydiid
Bismilaahi raxmaani raxiim Alle wayne isaga ayuunbaa awoodee haynaga dulqaado abaarta baahsan ee gebi ilaa gebi geyigeena wada gaadhsan.
Waxaan maaanta qoraalkeenan ku baafinayaa baafin baahsan oo bulshaysan gudidii abaaraha oo noqday hilaac biligle ah meel ay sal iyo lug dhigeenaa aan ilaa hadda lahayn.
Hantidii lacag mood iyo manfac wixii lasoo uruurshay oo ay tabayaan dhamaan dadkii abaartu haysay iyada oo aanay jirrin weli wax roob ah oo ina helay.
Dadkii abaartu haysay ee joogay aagaga barrio oo idil weli waxba mahayaan sidoo kale dadkii joogay ama usoo hayaamay deegaanka galbeedka yaguna waxba mahayaan xoolihiibaaba kasii dhamaaday labadoodaba hadana dadkii baa halis ku jirra iyada oo lasheegayoba meelo xoolihii is cuneen amaba xoolihii oo dad cunay.
Waxaa is weydiin u baahan halka ay ka dheceen gudidii abaaraha ee hawshan loo xilsaaray iyo kuwii la wareegya akoonadii lacagta lagu soo uruurshay iyo raashinkii laynoogu soo deeqay ee ilaa hadda rag danno gaar ah leh ay ku xidheen bakhaaro u gaar ah.
Dunnida caalamka iyo dalalka caadiga ah marka abaari amaba aafo dabicii ah dhacdo waxaa loo jeestaa gurmadkaas oo keli ah laakiin inaga dad iyo dawladba waalaga jeestay abaartan gobolada barrigana waxaad moodaa amaba cad sidii xukuumada kazoo yeedhaysay inaan dan saas ah aan laga lahayn.
Alle waxaan waydiisanaynaa dawlad tan dhaanta o leh isla xisaabtan kii iyo in qofwalba ama guddi kasta laga helo hawshii loo diray sidatan iminka la waayay nimankii gudida abaaraha lagu magacaabayna aan dhicin oo leh la xisaabtankii cidkasta oo dadka iyo dalka u adeegaysa waxaad moodaa xagii sarre inay ka sexxatay hawshan abaarta iyada oo xaflado iyo lagun mashquulsanyahy in laiibiyo ma lagalo heshiisyo dalka qayb lagu bixinayo.